Oktoobar – Blast Off to Kindergarten
Ilmahaaga bar in ay dhegeystaan hadalka loo sheegayo iyo waxa loo tilmaamayo. Marka ay bilaabaan dugsiga barbaarinta caruur badan waxa ay fariisan karaan wakhtiyo gaaban markiiba, qiyaastii 15 daqiiqadood, in ay raacan tusmoyinka ay hadallada uu ku dhawaaqayo baraha.
Hubso in aad wakhti u samaysid ilmahaaga idinka oo inta meela wada fadhiisataan muddoyin leh wakhtiyo gaagaaban. Wakhtiga wadaagista buugagga ama cayaar la cayaarayo waa marka ugu fiicaan ee lagu xijinayo in muddo 15 ilaa 20 daqiiqadood meel la wada fadhiisto oo la aamusnaado.
Dhegayesashada iyo tusmoyinka la raaco waa xirado muhiim oo ay u baahanyihiin in ay u bartaan koox ahaan, ay wada jir ula socdaan darsiga, iyo in la fahmo akhbaarta la siinayo. Ilmahaaga kala hadal siyaabaha uu ku noqon karo dhegeyste fiican. Kala hadal muhiimada ay leedahay in dhawro sharciyada dugsiga iyo sidii aa ilmahaaga uu ku heli lahaa ammaano iyo farxad.
Ilmahaaga ka caawi in uu u barto sida wax loo dhegeysto iyo ay raacaan tusmada ayaado la cayaarayo ilmahaaga la qaad “Hoggamiyaha Raac” (Follow the Leader). Qofka ugu horeeya ee hoggamiyaha ah dhaqdhaqaaq ayuu sameynayaa, wajiga ayu baaq ku bixinayaa, ama siyaabo kale ayuu jirkiisa boos ugu yeelayaa qofkastana waa in uu hoggaamiyaha raaco.
Ilmahaaga, qoyskaaga iyo saaxiibaddaada la cayaar cayaarta “teleefoonka”. Qofkasta waxa uu u fadhisanaya qaab si goobabeyn u wareegsan qofkastana waxa uu qofka midigta ka xiga dhegta ugu sheegayaa hadal ama wedh. Qofkakastana qofka xiga ayuu dhegta wax ugu sheegayaa, sidaasaana lagu wadayaa. Ujeeddada cayaarta waxa ay tahay in qofka ugu dambeeyo uu ku dhawaaqo ereyga ama weedha uu qofka ugu horreyay yiri.
Akhriska Laysu Diyaariyo
Buugaaga iyo wax lagu cayaaro gurigaaga meelkasta ka dhig! Bugaaga aysan biyaha wax dhimaynin iyo warqado kale ha lagu akhristo wakhtiga qubeyska. Ilmahaaga ku caawi in ay “qoraan” buugga cuntada ee caruurta oo jikada la dhigo lana isticmaalo wakhtiga cashada. Xarfaha bir-danabka leh ha lagu dhejiyo albaabka qaboojiyaha.
Ku dadaal in ilmahaaga fursado ay ku sameyaan noocyo kala duwan ee jimicsiga jirka. Marka ay bilaabaan dugsiga barbaarinta caruur badan waa ay ordain, boodaan, id lulaan, iyo waxa ay isticamaalaan banooniyo. 4 iyo 5 jirrada badankooda banooniga ayay cagta ku dhiftaan, banooniga ayay tuur tuuraan, banooniga ayay qabtaan, meeley.